Fandrobana sy vono olona :: Vehivavy mpanangona lavanila matin’ny jiolahy • AoRaha
Fandrobana sy vono olona Vehivavy mpanangona lavanila matin’ny jiolahy
Tsy nanan’ireo jiolahy antra ny vehivavy iray mpanangom-bokatra lavanila tany Vato­masina-Manakara, tamin’ny alin’ny 9 jolay lasa teo. Notafihin’izy ireo ny toerana fitobian’ny lavanila an’io vehivavy io. Sady voafira famaky no notifirin’ireo jiolahy izy ka namoy ny ainy avy hatrany.
Naratra mafy kosa ireo mpiambina sy mpiasa tao amin’ilay toerana. Lasan’ireo jiolahy ny lavanila enina gony, taorian’izay.
“Tokony ho tamin’ny 8 ora sy sasany alina no nitrangan’ ny fandrobana. Niditra an-keriny tao amin’ny trano fitobian’ireo vokatra voaangon’ ny vehivavy mpandraharaha izy ireo, niaraka tamin’ny basy sy antsy lava. Tsy nisy fanoherana fa avy hatrany dia notifiriny sy novelesiny tamin’ ny antsy ny tompon’ireo vokatra. Niharan’ny herisetra koa ny mpiasany”, hoy ny loharanom-baovao nampita ny zava-niseho.
Vao nandre ity vaovao ity ireo zandary, tany Ampasimanjeva, dia nihazo avy hatrany ilay toerana. Tsy nisy hita intsony anefa ireo jiolahy fa efa tafaporitsaka niaraka tamin’ireo lavanila. Nisy ny angom-baovao nataon’ireo mpitandro filaminana. Olona iray no voatonontonona ka nosam­borin’ny mpanao famotorana.
“Tra-tehaka tao amin’ny tranon’io olona io ny lavanila telo gony milanja enimpolo kilao. Taorian’izay dia voa­sambotra ihany koa ny olona roa isan’ireo nandray anjara tamin’ity fanafihana nahafatesana olona ity”, hoy kosa ny loharanom-baovao avy amin’ireo mpitandro filaminana.
Samy voatazona ao amin’ ny tobin’ny Zandarimaria any Manakara ireo olona telo voampanga ireo. Raha tsy misy ny fiovana dia hatolotra ny Fitsarana amin’ny faran’ity herinandro ity izy ireo.
Fanakanan-dalana :: Lehilahy nandeha sarety maty voatifitra